#Carlos Tevez“Messi wuxuu sameeyaa wax aan qof kale sameyn karin” - Get Latest News From Horn of Africa
#Carlos Tevez“Messi wuxuu sameeyaa wax aan qof kale sameyn karin”
By WARIYAHA CAALAMKA On Apr 18, 2019 Last updated Apr 18, 2019
Laacibka waayeelka ah ee reer Argantina Carlos Tevez ayaa amaan kala dul dhacay xidiga ay isku dalka kasoo wada jeedaan ee Lionel Messi, kaddib bandhigii cajiibka ahaa uu ka sameeyay kulankii Manchester United.
Carlos Tevez ayaa wuxuu shaaca ka qaaday sida uu ula yaabay in Messi uu ku jiro qaab ciyaareed wanaagsan ee isku mid ah sanadihii la soo dhaafay, wuxuuna tilmaamay in markale uu sidaas ku muujiyay kulankii Manchester United ay kaga adkaadeen 3-0 lugta labaad wareega siddeed dhamaadka tartanka Champions League.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu daabacay wareysi uu dhawaan bixiyay xidiga reer Argantina ee Carlos Tevez.
“Waxaan mar walba sheegaa in Messi uu naga yaabsado dhamaan ciyaartoyda kubadda cagta, way nagu adag tahay inaan la yaabno ciyaartoyda ugu fiican kubadda cagta, balse isaga waa kan kaliya ee sidaas sameyn kara”.
“Marka aad aragto waxaad xireysaa indhahaaga, kaddib marka aad furtana waxaad naftaada weydiineysaa sidee ayuu arintan ku sameeyay?”.
“Mararka qaar waxaan ku arkay isagoo kubadda la dhex maraya 2 iyo 3 ciyaartoy, dhamaantoodna waxay ordaydaan isaga gadaashiis, waxaan u maleynayay inuusan gool dhalin karin maadaama ay ku cadaadinayaan sida ay kubadda kaga dhigi lahaayeen, balse wuxuu dhamaantood ku dhaafay gambis”.
Si kastaba Lionel Messi ayaa dhaliyay 2 gool kulankii lugta labaad wareegaa siddeed dhamaadka tartanka Champions League ay kooxda Manchester United ku wada ciyaareen garoonka Cump Nou.
27 mins ago 36,504
46 mins ago 31,205